Higgs boson: waa maxay, astaamaha iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 20/02/2021 11:52 | Ciencia
Qeybta fiisikiska kubeega, isku day ayaa la sameeyay si loo darso qaabka uu asal ahaan uga soo jeedo cufka adduunku. Tan awgeed, waxay suurtagal noqotay in la ogaado Higgs 'Boson. Waa qayb aasaasi ah oo saynisyahannadu u maleynayaan inay leedahay door aasaasi ah oo ku saabsan ogaanshaha sida koonku u unkay. Xaqiijinta jiritaanka koonku waa mid ka mid ah ujeeddooyinka weyn ee 'Hadron Collider'. Waa xawaaraha ugu yar uguna awoodda badan adduunka.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa iyo waa maxay Higgs boson, maxay yihiin astaamahiisa iyo sida ay muhiimka u tahay.
1 Muhiimadda Higgs boson
2 Hawlgalka makaanikada
3 Ogaanshaha Higgs boson
4 Waxtarka bulshada
Muhiimadda Higgs boson
Muhiimadda ay leedahay Higgs boson waa in ay tahay walxaha keliya ee suuragal ka dhigi kara sharraxaadda asalka koonkan. Moodalka caadiga ah ee fiisigiska walxaha wuxuu si fiican u qeexayaa dhammaan kuwa walxaha aasaasiga ah iyo isdhexgalka ay la leeyihiin deegaanka ku hareeraysan. Si kastaba ha noqotee, qayb muhiim ah ayaa weli ah in la xaqiijiyo, taas oo ah waxa jawaabta naga siin kara asalka tirada. Waa in lagu xisaabtamo in haddii jiritaanka cufnaanta koonku uu u dhacay si ka duwan kan aan naqaan. Haduu elektaronku lahayn tiro Atamka atomku ma jiri lahayn oo shaygu ma jiri doono sidaan ognahay. Hadday cufnaan lahayd, ma jiri lahayn kiimiko, bayooloji, iyo noole toona ma jiri doono.
Si loo sharraxo muhiimadda waxaas oo dhan, ayaa Peter Higgs-kii Ingiriiska ee 60-meeyadii wuxuu caddeeyay inay jirto farsamo loo yaqaanno beerta Higgs. Sida photonku u yahay qayb aasaasi ah markaan tixraacno aagagga magnetka iyo iftiinka, goobtani waxay u baahan tahay jiritaanka walxaha soo ururin kara. Tan ayaa ku jirta muhiimada qaybtani maadaama ay mas'uul ka tahay sameynta goobta lafteeda shaqeyso.
Waxaan dooneynaa inaan sharaxaad ka bixino xoogaa sida farsamooyinka garoonka Higgs ay u shaqeeyaan. Waa nooc isdaba-joog ah oo ku baahsan meel kasta wuxuuna ka kooban yahay tiro aan la tirin karin oo ah Higgs bosons. Waa cufnaanta qaybaha ay sababi lahayd isku dhac ku yimaada aaggan, sidaa darteed waa lagu soo gabagabeyn karaa taas dhammaan walxaha leh khilaaf weyn oo ka jira meeshan waxay leeyihiin tiro badan.
Waxaa jira dad badan oo inaga mid ah oo aan runti garanayn waxa loo yaqaan 'boson'. Si loo fahmo inbadan oo ka mid ah fikradahan xoogaa ka murugsan, waxaan falanqeyn doonnaa waxa uu yahay boson. Qaybaha Subatomic-ka waxaa loo qaybiyaa laba nooc: halsano iyo boon. Kuwani ugu horreeya ayaa mas'uul ka ah samaynta arrinta. Arrinta aan maanta ognahay waxay ka kooban tahay hal bacaad lagu lisay. Dhinaca kale, waxaan leenahay laabtooyin mas'uul ka ah qaadida xoogagga ama is dhexgalka maaddada ka dhexeysa. Taasi waa, markay arrintu dhexgeli karto mid iyo tan kale, waxay sameysaa xoog waxaana go'aamiya laabta.
Waxaan ognahay in atomku ka kooban yahay electron, proton iyo neutron. Waxyaabaha ay ka kooban tahay atomku waa fermyo, halka photon, gluon, iyo W iyo Z bosons ayaa mas'uul ka ah xoogagga elektromagnetic siday u kala horreeyaan. Waxay sidoo kale mas'uul ka yihiin xoogagga tamarta daran iyo kuwa nugliyeerka ah.
Ogaanshaha Higgs boson
Higgs boson si toos ah looma ogaan karo. Sababta tan ayaa ah mar haddii kala-daadashadeeda dhacdo inay ku dhowdahay isla markiiba. Mar alla markii ay kala daadato, waxa soo baxa waxyaalo kale oo aasaasi ah oo annaga aad noogu badan. Marka waxaan arki karnaa oo kaliya raadadka Higgs boson. Qaybaha kale ee laga ogaan karo LHC. Gudaha borotoonka dardar-dhaliyaha walxaha ayaa isku dhaca xawaare aad ugu dhow kan iftiinka. Xawaarahaan waxaan ku ognahay inay shilal ka dhacaan goobaha istaraatiijiga ah iyo qalabka wax lagu baaro oo waaweyn ayaa la dhigi karaa.
Marka jajabku sidaas iskula qabsado waxay dhaliyaan tamar. Markasta oo ay sare u kacdo tamarta ay soo saaraan jajabku markay isku dhacaan, ayaa aad u badan culeyska ay soo saaraan walxahaas. Maxaa yeelay aragtida uu aasaasay Einstein ma dhisayso cufkeeda, laakiin noocyo kala duwan oo qiimayaal suurtagal ah, xawaare-dhaliyeyaal awood-sare leh ayaa loo baahan yahay. Qeybtan fiisikiska oo dhan waa dhul cusub oo la baarayo. Dhibaatada ogaanshaha iyo baaritaanka shilalka shilalka waa wax qaali ah oo adag in la fuliyo. Si kastaba ha noqotee, ujeedada ugu weyn ee soo-saareyaasha walxaha waa in la ogaado Higgs boson.
Jawaabta haddii ugu dambayntii la helay Higgs boson waxaa lagu qeexay tirakoob. Xaaladdan oo kale, leexashooyinka caadiga ah waxay muujinayaan suurtagalnimada in natiijada tijaabada lagu cabi karo fursad halkii ay ka noqon lahayd saameyn dhab ah. Sababtaas awgeed, waxaan u baahanahay inaan ku guuleysano muhiimad weyn qiyamka tirakoobka oo aan markaa kordhinno suurtagalnimada indho indheyn. Maskaxda ku hay in dhammaan tijaabooyinkaasi ay u baahan yihiin in lagu falanqeeyo xog fara badan tan iyo markii shilku uu dhaliyo qiyaastii 300 milyan oo shilal ilbidhiqsi kasta. Dhamaan shilalkaas, xogta ka soo baxday way adagtahay in la qabto.
Haddii ugu dambayn la ogaado Higgs boson, waxay u noqon kartaa horumar bulshada. Waana inay calaamadeyso wadada baaritaanka dhacdooyinka kale ee jirka sida dabeecadda maadada madow. Maaddada mugdiga ah waxaa lagu yaqaan inay ka kooban tahay 23% koonka, laakiin waxyaalaheeda inta badan lama yaqaan. Waxay caqabad ku tahay edbinta iyo tijaabooyinka ku saabsan xawaaraha walxaha.
Haddii Higgs boson aan waligiis la ogaan, waxay ku qasbi doontaa inay dejiso aragti kale si ay u awoodaan inay sharraxaan sida ay jajabku u helaan cufkooda. Waxaas oo dhami waxay horseedi doonaan horumarinta tijaabooyin cusub oo xaqiijin kara ama diidi kara aragtidan cusub. Maskaxda ku hay in tani ay tahay habka saynisku ugu habboon yahay. Waa inaad raadisaa wax aan la aqoon oo tijaabiya ilaa aad ka hesho jawaabaha.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto Higgs boson iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Higgs boson